FNF ညတိုက်ပွဲ – သောကြာနေ့ Funkin Music Tap Cheats&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
FNF ညတိုက်ပွဲ – သောကြာနေ့ Funkin Music Tap Cheats&Hack
အားဖြင့် Editor | စက်တင်ဘာလ 27, 2021
မိုက်ခ်စစ်ဆေးပါ! စမ်းသပ်ခြင်း 123 ️🎤
ငါ့ကို! Friday Night Funkin ပြပွဲမှကြိုဆိုပါသည်, မင်းကကြယ်ဖြစ်မယ့်နေရာမှာမင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအားလျှော့ပြီးဒီဂီတတိုက်ပွဲကိုတွန်းလိုက်ပါ
သောကြာည Funkin မှလှုံ့ဆော်မှု, FNF ဟုလည်းခေါ်သည်, ရယ်စရာဂီတဂိမ်းနှင့်ရစ်သမ်တိုက်ပွဲ. FNF ညတိုက်ပွဲ – သောကြာနေ့ Funkin Music Tap ဂိမ်းကစားခြင်းလှိုင်းသစ်ကိုသင့်အားယူဆောင်လာလိမ့်မည်, ဂီတထိပုတ်ပါ. Girlfriend ကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ပါ, မင်း Boyfriend အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီးရက်ပ်တိုက်ပွဲမှာ ၀ င်ပါ. မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က touchscreen ပေါ်ကစက်ဝိုင်းတွေကိုတို့ပါ, သီချင်းဆိုပြရန်နှင့်ဇာတ်စင်ကိုထွန်းညှိရန်ပုံသေလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုစက်ဝိုင်းတစ်ခုဆွဲပါ. FNF သည်သင့်အားရူးနှမ်းပြီးအံ့သြဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံသို့မောင်းနှင်နိုင်သည်, သင်၏လက်ချောင်းကို Hard and Sick Mode ဖြင့်ဖွင့်ပါ
– mod ဇာတ်ကောင်အပြည့်
– အမျိုးမျိုးသောကစားနည်း (ပုံပြင်, ခက်တယ်, ဖျားတယ်,…)
– တစ်ချက်တို့ပြီးထိန်းချုပ်ပါ, ကစားရန်လွယ်ကူသည်
– သာသုံးပါ 1 ထိန်းချုပ်ရန်လက်ချောင်း
– FNF ဂီတမြှားကိုနှိပ်ပါ
Rhythm ကိုတီးခတ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား, ရိုက်နှက်မှုကိုသတ်ပြီးဇာတ်ခုံကိုငါတို့နှင့်အတူမီးရှို့ပစ်ပါ? ဒေါင်းလုပ် FNF ညတိုက်ပွဲ – သောကြာနေ့ Funkin Music Tap နှင့်ယခုရယူကြပါစို့! ️🎸
– ကစားနည်းအမျိုးမျိုး (ပုံပြင်, ခက်တယ်, ဖျားတယ်,…)
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): တိုက်ပွဲ, မင်္ဂလာပါ, fnf, Friday, Funkin, ဂီတ, Night, ပုတ်ပါ
← စူပါအကျိအချွဲရောင်းဝယ်ရေးမာစတာ 3d – slimy ယောက်ယက်ခတ် Cheats&Hack နိုက်၏စီးနင်းမှု: ပျောက်ဆုံးသွားသော Skytopia – လှိုင်သာယာ&Hack →